Izicelo zeMacOS ezinikezelwe kwiWWDC 2017 yoyilo lwabo | Ndisuka mac
Izicelo zeMacOS zinikwe iWWDC 2017 kuyilo lwazo
UJavier Labrador | | Mac App Store
Njengoko sisazi, kule veki iNkomfa yoMqambi we-Apple iyenzeka eSan José, California. Umsitho, oqale ngomxholo ophambili ngoMvulo, nge-5 kaJuni, Sesinye seziganeko ezinkulu kwizicelo ze-elektroniki nakwizixhobo emhlabeni, Kwaye konke oku kunxulumene nesoftware ka-Apple kunye neemveliso zayo.
Esinye seziganeko ezibalaseleyo minyaka le Amabhaso okuYila ama-Apple, amabhaso apho iApple yamkela ezona zicelo zibalaseleyo kunye nemidlalo ngokwendlela yoyilo, uyilo kunye nokusetyenziswa. Ngaphandle kwento yokuba uninzi lwamabhaso luye kusetyenziso lwezixhobo ze-iOS, minyaka le ezinye zezicelo ze-macOS ecosystem zingena.
Nangona kunjalo, kulo nyaka, Amabhaso okuYila ama-Apple Khange babenampembelelo ininzi njengeminye iminyaka. Umnyhadala uye wabucala ngakumbi kwaye kukho amarhe okuba yeyokugqibela iWWDC apho amabhaso anikezelwa. Yiba njalo, uluhlu lwabaphumeleleyo abanesoftware ekhoyo kwiMac ngolu hlobo lulandelayo:
zeBhere (Isicelo sase-Italiya) sithweswe isithsaba njengowona mxholo uphambili kunye nomhleli wokubhaliweyo kwiVenkile yeApple yeMac. Ngombulelo kwinani leempawu elinazo kunye noyilo lwayo ngononophelo, esi sicelo sithweswe isithsaba njengeyona nto ibalaseleyo kulo nyaka. Yiyo kuphela yabaphumeleleyo ekhululekile. Ikwafumaneka nakwizixhobo ze-iOS.
Izinto 3 (Inkqubo yaseJamani) yi umphathi owaziwayo ogqityiweyo ohlaziyiweyo, emva kweminyaka emi-5, kwaye uzuze ngokufanelekileyo eli bhaso. I-classic evela kwi-Mac App Store esingenakuphuthelwa. Iyafumaneka kuzo zonke izixhobo ze-iOS nakwi-Apple Watch.
I-AirMail 3 (Usetyenziso lwesiTaliyane) yi Umphathi weposi ngokugqwesa kwizixhobo zeMacOS, kunye ne-iOS mva nje, iwotsOS. Sesinye sezona zicelo zigqibeleleyo kwi "Ivenkile" kwaye enkosi ngokudityaniswa kwayo kunye neempawu zayo, sisicelo esizalisekisa umsebenzi waso ngokugqibeleleyo. Ukongeza, uyilo lwayo lusivumela ukuba sichithe iiyure silisebenzisa ngaphandle kokuqonda oko. Yinto entle kakhulu. Ixabiso layo yi- $ 10,99 kwiVenkile yeApple yeMac.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iinkqubo zeMac » Mac App Store » Izicelo zeMacOS zinikwe iWWDC 2017 kuyilo lwazo
I-OWC iqinisekisa ukuba yonke iMac entsha engama-27 inokufaka ukuya kuthi ga kwi-64GB ye-RAM
Yenza ubugcisa obuninzi kunye neefoto zoqobo ngokuGxila kwiFoto